Maxaan uga been sheegnaa howlgabnimada? - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaMaxaan uga been sheegnaa howlgabnimada?
Marka ereyga internetka ka raadisid”howlgab aad ka raadisid ” waxaa shaashadaada soo buuxinaya sawiro dad ku jira nasasho,kuwa baaskiil wada iyo kuwa waqti wanaagsan la qaadanaya caruurta ay awoowaha u yihiin.
Balse xaqiiqada dad badan waa mid ka duwan , qaar badan oo ka mid ah dadka howlgabka noqday ayaa dhoworka bilood ee ugu horeeya howlgabnimadooda waxay soo wajahda dhibaato badan ,waxaa sidaasi sheegtay Teresa Amabile oo ah profeesar wax ka dhigta jaamacadda Harvard.
“Waxay noqon kartaa waqti aad u jahwareer badan,” ayay intaa ku dartay.
In ka badan afar sano, Prof Amabile iyo koox la shaqaynaysay waxay su’aalo waydiiyeen 120 qof oo xirfadlayaal ah oo wax laga waydiiyay sida ay u arkaan howgabnimada.
Natiijada hordhaca ah ee la ogaaday ayaa ah mid la yaab leh ,iyada oo howlgabnimada ay ku bilaabato waqti nasiino ah oo uu qofka helo ayaa hadana waxaa muddo ka dib farxadu noqotaa mid wiiqanta oo hoos u dhacda.
“Arrintan ayaa la yaab ku noqotay tiro ka mid ah dadka,” ayay tiri Prof Amabile.
“Dadka ayaa waxay u maleeyaan in qorshaynta howlgabnimadu ay tahay howl dhaqale oo ay intaasi ku egtahay,balse waxay u baahan tahay in qofka uu maskax ahaan iyo xiriir ahaanba uu isu diyaariyo,ayay inta ku dartay.
“Waa in aan ka fikirnaa waxa aan noqonayno iyo cida an doonayno in aan noqono marka xirfadaada aad howlgab ka noqotid ..”ayay intaa ku dartay Prof Amabile
‘warkii shalay ‘
Mid ka mid waxyaabaha ay daaha ka rogtay cilmi-baaristan ayaa ah marka la waydiiyo dadka howlgabka noqonaya waxa ay isku tilmaami lahayeen.
“Waxay caadiyan ku jawaabaan , ‘waxaan ahay macalin howlgab ah’ ama’waxaan ahay cilmi-bare howlgab ka noqday maadada Kamistariga ,waxaa wali qalbiyadooda ku taagan xirfadii iyo wixii ay ahaayeen ,” ayay tiri Prof Amabile.
“Qaar ka mid ah dadka ayaaba inkira in ay howlgab yihiin taasi oo ah mid xiiso leh , waxayna kuu sheegayaan waxa ay xirfadoodu tahay inkastoo aysan imika ku shaqayn xirfadaasi .
“Waxaanu wax ka waydiinay sababta ay arrintan u samaynayaan,waxayna ku jawaabeen ma doonayno in noola arko qof suuqa shaqada ka baxay’ ayay tiri Teresa Amabile oo ah profeesar wax ka dhigta jaamacadda Harvard .”
Mid ka mid ah dadkii aan wareysanay ayaan noo sheegay ‘ma doonayo in la ii arko warkii shalay ee duugoobay,waxaan doonaya in aan noqdo warka cusub ee maanta ‘.”
‘La yaabka ay shaqadu leedahay’
Prof Edmund Phelps ayaa ka hadlaya shir ay soo qabanqaabisay daladda Nobel Foundation oo la isugu keenay dadkii ku guulaystay bilada nabadda ee Nobel iyo khubaro kale oo ka hadlaya mustaqbalka dadka waayeelka ah.
Edmund Phelps waxa la siiyay abaalmarinta dhaqalaha Seyniska 2006 islamarkana isaga oo ku jira 80 hadana wali waa nin adag.
Maalmaha kooban ee uu ku sugan yahay magalada Madrid waxa uu waqtigiisa ku bixin doonaa jeedinta khudbado iyo wareysiyo ay warbaahinta la yeelanayso
“Shaqadu waxay asaasi u tahay noolashaada wanaagsan ,” ayuu yiri
“Shaqada waa isha macnaha dhabta ah ee jiritanka dad badan,” ayuu intaa ku daray Edmund Phelps
“Dhammaan dadka shaqdu waa u muhim in aad ciyaarto door aad wax cusub ku heli karto .
Waxaa arrintan ku raacsan Mario Vargas Llosa oo isaguna horey ugu guulaysatay billadda Nobel,waxa uu isana ku jira da’da 80 waxa uuna maalin walba xafiiskiisa ka shaqeeyaa 10 subaxnimo ilaa 2 duhurnimo.
“Toddobaadkii 7 maalmood ayaan shaqeeyaa ,iyo guud ahaan 12 bilood ee sanadka,” wuxuu sidaasi uu u sheegay BBC.